Shikhar Post » नेपालमा पाँचतारे होटलको संख्या १३ पुग्यो, कहाँ ठाउँमा कुन होटल ? हेर्नुस्:
नेपालमा पाँचतारे होटलको संख्या १३ पुग्यो, कहाँ ठाउँमा कुन होटल ? हेर्नुस्:
काठमाडौं । पछिल्लो समयम पर्यटन क्षेत्रमा लगानीगर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस बर्ष उपत्यका बाहीर होटेल सेन्ट्रल प्लाजाले पाँचतारे मान्यता पाएसँगै अब देशभर पाँचतारे होटलको संख्या १३ पुगेको छ ।
१३ मध्ये दुई पोखरा, एक नेपालगन्ज, एक कोहलपुर र भैरहवामा अवस्थित छन । बाँकी आठवटा होटल भने काठमाडौंभित्र छन । मान्यताप्राप्त १३ होटलमध्ये नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटेल र पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्ट बन्द अवस्थामा छन । अन्य होटेल भने चलिरहेका छन ।
नेपालमा होटलमार्फत व्यवस्थित आतिथ्य सेवा प्रदान गर्न थालिएको आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । त्यसयता निरन्तर होटेल उद्योगमा लगानी बढिरहेको छ । होटेल सेन्ट्रल प्लाजा, कोहलपुर सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियर : नेपालगन्ज सोल्टी होटेल, ताहाचल, काठमाडौं फूलबारी रिसोर्ट, पोखरा (हाल बन्द) तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटेल बौद्ध, काठमाडौं याक एन्ड यती दरबारमार्ग, काठमाडौं होटेल डेल अन्नपूर्ण : दरबारमार्ग, काठमाडौं होटेल सांग्रिला लाजिम्पाट, काठमाडौं द मल्ल होटेल : लैनचौर, काठमाडौं पोखरा ग्रान्ड ,पोखरा होरियन्टल (र्‍याडिसन होटेल) ,लाजिम्पाट, काठमाडौं होटेल एभरेस्ट नयाँबानेश्वर, काठमाडौं (हाल बन्द)
टाइगर प्यालेस तिलोत्तमा, रुपन्देही